Mponin’i Melbourne 100.000 nanao diabe hanova ny fitsipika ho amin’ny fiarovana ny asa sy karama tsara kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2018 5:22 GMT
“Ovay ny Fitsipika” Famoriam-bahoaka tao Melbourne tamin'ny 9 Mey 2018 – Sary tao amin'ny kaonty Twitter @VanBadham
Tamin'ny 9 Mey 2018, nanao diabe tany Melbourne, Australia ireo mpiasa maherin'ny 100.000 sy ny mpanohana azy ireo mba hitaky asa azo antoka kokoa sy karama bebe kokoa. Tafiditra ao anatin'ny fanentanana Ovay ny Fitsipika, nokarakarain'ny Fiombonan'ny Sendikan'ny Mpiasa Aostraliana(ACTU) ny fihetsiketsehana.
Nalaza be tao amin'ny media sosialy ny hetsika ary niseho tao amin'ny Twitter Moments ihany koa.
Nipongatra ny fanentanana nandritra ny tontolon'ny asa miha-tsy azo antoka, karama tsy mitombo sy ny famelezana karama sy ny fepetran'ny asa. Izany dia maneho ny ahiahy momba ny fitomboan'ny hantsana, ny fitomboan'ny fahefan'ny orinasa goavana ary ny fivoahan'ny resaka fa tsy mandoa hetra ny ampahatelon'ny vondron'orinasa lehibe.
Mihevitra ihany koa ny hetsiky ny sendika fa simba ny rafitra fifandraisana indostrialy any Aostralia ary mila fanavaozana lehibe. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niharan'ny famerana henjana momba ny zo hanao hetsika ara-indostrialy sy ny zo hitokona ireo mpikambana ara-sendikaly .
Ny fitarainana manokana dia ny fahaverezan'ny tambin-karama Alahady ho an'ny mpiasan'ny varotra atsinjarany, ny hotely fandraisam-bahiny sy ny mitovy amin'izany. Ny tambin-karama dia avo kokoa ho an'ny asa amin'ny fotoana sasany toy ny faran'ny herinandro, andro tsy fiasana na ora fanampiny. Nahenan'ny Vaomieran'ny Asa Ara-drariny, fahefana tompon'andraikitra amin'ny fifandraisana ara-indostrialy ny tahan'ny tambin-karama Alahady tamin'ny taona 2017.
Ny feo vaovao ao ambadiky ny fitantanana sendikà matanjaka ao Aostralia
Mandalo ao amin'ny mpitarika ambony sady mampiadihevitra, Sally McManus izay lasa sekreteran'ny ACTU tamin'ny volana Martsa 2017 ny ankamaroan'ny fanomezan-dàlana ho an'ny fanentanana .
Rehefa nanambara i McManus fa azo atao ny mandrava lalàna tsy ara-drariny, dia nisarika ny sain'ny haino aman-jery izy ary nahazo mpankasitraka avy amin'ny fomba fijeriny:
#SallyMcManus is to be admired for honestly saying a law should be broken if is unjust #auspol#abc730#thoreau#qoute#ethics#actupic.twitter.com/SZnhamwcdj
Tokony ankasitrahana i #SallyMcManus noho ny filazany am-pahatsorana fa tokony tsy hajaina ny lalàna raha tsy ara-drariny
Niampanga an'i McManus ilay Tasmaniana Tom Wise, nanondro ny fihenan'ny fidirana ho mpikambana ara-tsendikaly tao Aostralia tato anatin'ny folo taona:
Tsy mahagaga raha tsy miditra mpikambana sendikà ny mpiasa, raha nilaza i McManus fa azo atao ny manitsakitsaka lalàna tsy tianao. Jiolahimboto iray ny ACTU
Tsy nitovy tamin'ny fitomboan'ny mpikambana vozon'akanjo fotsy (cadres) sy matihanina ny fihenan'ny mpiasa vozon'akanjo manga (employés). Nanazava ny profesora Bradley Bowden:
Ny ampahan'ny olana amin'ny fahazoana mpikambana vaovao ho an'ny sendikà dia voafetra loatra ho an'ny andian'olona iray ihany ny fitadiavana mpiasa matihanina: dia ireo izay miasa amin'ny orinasa fehezina sy vatsian'ny fanjakana ara-bola, toy ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Amin'ireo sehatra ireo, mbola eo amin'ny ampahatelon'ny mpiasa ihany ny sendikà.
Na izany aza, nahazo fanohanana avy amin'ireo tranonkala liam-pandrosoana ny fitantanan'i McManus. Tamin'ny Novambra 2017, niresaka momba ny andraikiny taorian'ny fanombohan'ny fanentanana ny gazety Independent Australia:
Fantatr'i McManus ny fomba fiasan'ny media rehefa mila azy izy, saingy fantany ihany koa ny fomba fiasa amin'ny efitra. Miresaka milamina, mahitsy izy, tsy misy fitenenana avo lenta na fitiavana amboamboarina.
Rehareha, hevi-bahoaka, politika
Tonian-dahatsoratry ny The Pen, feo ho an'ny olon-tsotra mikatsaka fiovàna, nisaintsaina momba ny fiantraikany ara-politika amin'ny fihetsiketsehana, indrindra ho an'ny governemanta federaly liam-pahazarana:
Ny fandraisana anjara amin'ity habe ity dia dòna lehibe ho an'i Malcolm Turnbull sy ny governemantany. Tsy misy na inona na inona afaka manazava intsony fa miova tanteraka manohitra azy ireo ny hevi-bahoaka, ary mety hiteraka aloka eo amin'ny fitokisana mety azon'ny governemanta tamin'ny tetibolan'ny omaly izany.
Nahasarika olona maro nanaiky izany ny tenirohy #ChangeTheRules.
Niantsafa an'i Sally McManus nandritra ny diabe ilay mpikatroka sady mpaneho hevitra Van Badham:
The great @vanbadham live interviews the leader of @unionsaustralia@sallymcmanus during the Melbourne #ChangeTheRules march while 120,000 people march with them#auspol#ausunionshttps://t.co/qzWkIUSh2T
Niantsafa tamin'ny mpitarika sendikà @unionsaustralia@sallymcmanus nandritra ny diabe #ChangeTheRules tao Melbourne izay nahitana mpandray anjara 120.000 i @vanbadham
Namariparitra ny fahatsapana izay azo antoka fa maneho ny fankalazan'ny vahoaka i McManus:
Izany fahatsapana mahafinaritra momba ny fiarahana. Izany ny fahatsapana sendika manodidina, fantatrao, tahaka ny olona rehetra manana fahatsapana mitovy, ary maniry ny rariny, vonona daholo hiady ho amin'izany.
Nilaza ny reharehan'izy ireo tamin'ny diabe ao amin'ny Twitter ireo mpikambana amin'ny sendikà:
Proud to be part the rally with my @ASUnion workplace. As a part time worker as well as a freelancer I know the difference working in a unionised industry or not and I'm sick of getting ripped off #changetheruleshttps://t.co/Dy3eH3FIgK
Mirehareha mandray anjara amin'ny diabe miaraka amin'ny toeram-piasako @ASUnion. Amin'ny maha mpiasa tapak'andro ary koa mpiasa mahaleotena ahy, fantatro ny fahasamihafana miasa amin'ny indostria manana sendikà na tsia ary leo ny voasoloky aho.
Nanao fihetsiketsehana izay tsapa ho toy ny diabem-pandevenana aho. Saingy mahery vaika anefa izany. Voaentana ny tsirairay amin'ireo olona 120.000 ao amin'ny araben'i Melbourne androany ary vonona hanova fitsipika #ChangeTheRules!
Mitohy manerana ny firenena ny hetsika “Ovay ny Fitsipika”